Njengoko sonke sisazi, iMarble yimveliso elungileyo, kwaye ke iintsapho ezininzi zisebenzisa i-marble ekuhombiseni kwazo, kwaye i-marble ine-marble yendalo kunye ne-faux marble. Kwaye nokuba yimarble eyenziweyo okanye imarble yendalo inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga.
Imabhile engeyonyani kukusebenzisa i-macadam yemabhile yendalo okanye i-granite ukuzalisa izinto, ngesamente, i-gesso kunye ne-polyester resin engafakwanga ukuba ibambelele, kwaye yenziwa ngokugungxula, ukusila kunye nokupholisha.
Imarble yendalo lilitye le-metamorphic elenziwe sisenzo sobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu kwi-crust.Iyakhiwe ikakhulu yi-calcite, ilitye lekalika, inyoka kunye nedolomite.
Izinto eziluncedo kunye nokungalunganga kwimarble yendalo kunye nemarble yokwenziwa.
Uncedo lwemarble yendalo yipateni yokuhombisa, ziva ulungile emva kokucoca kunye nobulukhuni bomelele. Ukuthintela ukunxiba okungaphezulu kakhulu kune-scagliola, ungoyiki imibala. Ububi bemabhile yendalo kukuba ayinakuba ngumthungo kwaye iinkozo kwindawo yokusongela ayinakulungelelaniswa ngokupheleleyo. Imabhile yemvelo ibrittle kwaye kunzima ukuyilungisa.
Uncedo lweemabula zokwenziwa luhlobo lwembala.Udibaniso lweemabhile alucacanga ngoko ke kukho ingqibelelo eyomeleleyo.Ibhetyebhetye ngakumbi kunemarble yendalo.Imabula yokwenziwa kwezinto zokwenziwa kwemichiza, ubulukhuni bayo buncinci, kulula ukukrwela kunye nebala .
Ixesha leposi: Dec-29-2020